Ingabe i-Brenton Harrison Tarrant ihlasela ukuqaliswa kobuphekula obuphikisana ne-anti-Turkey? : UMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-17 March 2019	• 10 Amazwana
Uma kufanele sikholwe izindaba zakamuva mayelana noBrenton Harrison Tarrant ukuhamba okudingekayo obonakala sengathi ikakhulukazi emlandweni wemvelo. Imali yokuhamba kwakhe yayizovela ekutshalweni kwezimali zeBitconnect (crypto currency). Yiqiniso lokho kuzwakala njenge-alibi ethembekile. Okushaywa ngokuyinhloko yimilayezo yokuthi Ukubheka sengathi kubonakala sengathi ufuna ukulwa nokuvuswa koMbuso Wase-Ottoman. Kushiwo ukuthi i-Tarrant ihambele eTurkey nasePakistan; amazwe amabili ahlobene eduze nemigomo yenkolo-yomlando. Isixhumanisi no-Anders Breivik senziwa futhi. Imithombo yaseBulgaria yatshela i-New Zealand Messenger ukuthi imibhalo yezikhali ezitholakalayo yabhalwa ngesiCyrillic. Le mibhalo ingabonisa amagama ezimpi ezidumile nezibalo zomlando ezivela eBalkans. Lezi zimpi zazilwa noMbuso wase-Ottoman. Izimpi ezilwa namaTurkey ase-Ottoman nazo zakhuthaza umphekula waseNorway Anders Breivik.
Kubonakala sengathi ukungezwani phakathi kwe "maKristu" namaSulumane sekuzokwandiswa ezindaweni eziphakeme. Ngakho-ke ngeke ngimangele uma sibona ukuphakama okusheshayo kobuphekula obufaneleko eYurophu nase-US. Khumbula ukuthi mhlawumbe lokhu kungukusebenza okungekho ngaphansi komhlaba lapho izinsizakalo zemfihlo ziphinde zadala khona iqembu labo lokwethula. Ngicabanga ukuthi kuzoba nokuxhumana noTethullah Gülen (okhethwe yiTurkey njengeqembu le-FETO lobuphekula). Ngiyazisola nokuthi sizobona imibiko yesikhathi esifushane ukuthi i-Tarrant iye yahlela imihlangano yokubeka isisekelo salezi zinhlamvu zamaphekula. Mhlawumbe uxhumano lwe-Balkan luzokwenziwa ekudala - I-Yugoslavia impi ehlobene - AbaseSerbian fighters (isitha esidala sase-Ottoman). Lokhu kungasho ukuthi sizobona okunye okunjalo (ngombono wami we-PsyOp) ukuhlaselwa kwezimiso zobuSulumane (futhi ikakhulukazi iTurkey).
AbakwaLee nje emuva lapha kungani emehlweni ami siphinde sibhekane ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo).
Konke lokhu kubeka isisekelo se-Europe esilindele isikhathi eside saseYurophu sokudla kweYurophu. Uma sizobona ukuphakama kwamacembu amaqembu angama-Christian-fundamentalist amaphekula amaqembu aphikisayo futhi ukuxhumana kuyenziwa neSerbia ne-FETO, yilokho okuyi-alibi ephelele ye-Erdogan yokuya eYurophu. Ngabikezela lokhu ngoba yingxenye yeskripthi lapho ngitsho khona ukuthi uMbuso Wase-Ottoman uzobuyiselwa i-2023. Le script ihlangabezana neziprofetho zenkolo futhi ihlangabezana nencwadi evela ku-1871, kusukela ku-33e degree Scottish Ride Freemason Albert Pike kumngane wakhe uGippeppe Mazzini, lapho ebikezela khona izimpi zezwe ezintathu. Okubili kokuqala kwalokhu kwakulotshiwe futhi kwasetshenziselwa ukusungula isimo sakwa-Israyeli. Impi yezwe yesithathu iyoba ngeJerusalema futhi iyokwenzeka phakathi kwezwe lamaSulumane kanye nezinsalela zezwe laseZionist. Kufanele ucabange ngale ndaba yomzabalazo phakathi koMbuso wase-Ottoman no-Israyeli obuyiselwe kanye ne-US. Uzothola ukuxhaswa okubanzi kokubikezela kwami ​​kokuvuka koMbuso wase-Ottoman in lesi sihloko. Kumongo wokuqonda okungcono izenzakalo zamanje, kuyasiza kakhulu ukuqaphela lokhu. Ngakho funda leyo ndaba ngokucophelela.
Masilinde imilayezo esikhathini esizayo esiseduze, kepha uma sizobona ukuhlaselwa kokuhlasela nokuphikisana kwesokudla ngokuzumayo kubonakala sengathi kuhlelekile ukubonakala njengedemoni ephuma ebhokisini, bese ukhumbuza lesi siprofetho.
Funda ngaphakathi lesi sihloko ukuthi ungafunda kanjani ukubona ngokusebenzisa script.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: rt.com
Umhlangano we-NATO: ukuthula kwezokuxhumana mayelana nokungqubuzana okungase kube khona ukuzungezeka kwe-Turkey ku-EU
Kusukela manje emlandweni weTurkey izikole zase-Atatürk zesiDashi: ngoba i-EU izokwenziwa ngokushesha ngama-Ottomans
Sizoqala! I-2019 ejabule futhi enempilo kubo bonke abafundi!
Amathegi: anti, I-Bitconnect, Brenton, ngokweqile, afakiwe, FETO, Harrison, Ottoman, kwesokudla, ocebileyo, I-Tarrant, ubuphekula, turkey
17 March 2019 ku-00: 57
"Siphinde sazi ukuthi ufike ezindaweni eziningi zokuqala zobuKristu nezingosi eTurkey," kusho u-Erim, enezela ukuthi embonini ethi ucabanga ukuthi uthumele i-intanethi, ukhuluma ngoHagia Sophia.
I-Hagia Sophia njengamanje i-museke-eyashintsha imyuziyamu e-Istanbul, eyayiyingqungquthela yaseGreek Orthodox yobuKristu beze-Patriarchal kuze kube yi-1453 lapho uMbuso Wase-Ottoman unqoba i-Istanbul.
17 March 2019 ku-00: 59
AmaSerbia angumvelaphi wesiGreki wama-Orthodox futhi singakwazi (mhlawumbe) silindele ukuthi isixhumanisi sizokwenziwa neSerbia.
Gcina usuku lwe-29 ngoMeyi - usuku lokuwa kweConstantinople ku-1453; ukuthunjwa kukaConstantinople ngama-Ottoman. Ukuphela koMbuso waseByzantium
Singalindela ukuhlaselwa kwamaphekula okulungile ku-Istanbul (owayekade eyiConstantinople)?
17 March 2019 ku-01: 04
Ubuphekula be-Right Wing buzophinde buxhunywe yiTurkey kuDonald Trump, ngoba wenqaba ukukhipha u-Fethullah Gülen.
Ngale ndlela ukuhlobana phakathi kweTrump, i-media ephezulu kakhulu (nelawulwa) ehlukile (njenge-Infowars, i-Alex Jones, njll) nayo ingenziwa futhi umhlambi ungaqhutshwa ngokuqondile emuva kwezindaba zakudala ne-oda elidala lezepolitiki. Ukunciphisa amazwe omhlaba kanye nokugxeka abezindaba kanye nababukeli bomlando "abaphambene" baphathwa.
Lokho kungukuqala kokuphendula kweketheni.
18 March 2019 ku-23: 49
Kube nevidiyo ku-Facebook eqoshwe emotweni yomenzi wobugebengu. Ingoma yaseSerbia enomdlandla idlale umsakazo wangemuva.
18 March 2019 ku-23: 53
Ingabe unesixhumanisi kuleyo vidiyo?
19 March 2019 ku-17: 29
Kwakuyindlela yokuphila, kodwa i-Youtube ibonakala sengathi isusile ividiyo (ingxenye yokugxekwa ...?)
17 March 2019 ku-02: 44
Izwe lokugcina lokuma!
17 March 2019 ku-14: 54
Ngendlela eqondakalayo ukuthi i-Tarrant iqeqeshiwe empini ku-2017 naku-2018. Ukuqagela izikhathi ezintathu ezweni?
17 March 2019 ku-18: 46
@ Sunshine. Amaqiniso nomthombo sicela. Ukusikisela kufaka phakathi imibuzo engaphenduliwe okuthiwa imibuzo ephathelene nemibuzo ingenani elincane.
30 March 2019 ku-15: 33
« Umdlalo wevidiyo webhayisikili uBrenton Tarrant (ukusakaza bukhoma) ku-Christchurch eNew Zealand
Ukuhlaselwa kwe-New Zealand: ukusungulwa okucacile kokucwaninga emhlabeni wonke, ukungaxhunyiwe kwesibalo sabantu kanye nokwehlisa umthetho »
Ukuvakashelwa okuphelele: 11.722.388